ရနျကုနျတိုငျးဒသေကွီးအတှငျး ကြေးလကျနပွေညျသူမြား ၁၀၀ ရာခိုငျနှုနျး လြှပျစဈဓာတျအားရရှိရနျ စီမံဆောငျရှကျနေ - Myanmar Builders Guide
All Categories 3rd Party Inspection Air Conditioning Aluminium Architect Banks [Govt.] Banks [Overseas] Banks [Private] Bath & Toilet Building Materials Carpets, Canvas & Linoleum Ceiling Cement Ceramics Civil and Structure Cleaning Cleaning Equipment Concrete Products Concrete [Ready-Mix] Concreting Equipment Condo Salesroom Construction Materials Construction Services Consultants [Construction] Contractor Crane Curtains Decoration Designers [Interior] Doors and Shutters Earthwork Electrical Goods Electronic & Electrical Home Appliance Electronics Fire Fighting Floor, Wall Formwork & Scaffolding Galvanized Iron Sheets Gas Pipe Installation Gates and Fence Generator & Transformer Geo-Engineering Glass Hardware Tools Hardware Tools [Equipments] Hardware Tools [Materials] Heavy Equipment Home Furnitures Insulation Iron Kitchenware & Appliances Landscaping Legal Consultants Lifting Lifts & Escalators Lighting Lime Machinery Spare Parts Mechanical & Electrical Metal Door Moving Services Office Furnitures Office Use Painters Paints Parquet Personal Protective Equipment Piling Pipes & Accessories Plastic Plumbing Polish Project Management Property Management PVC Products Quantity Surveyor Real Estate Agents Refined Wood Roofs Sand, Brick & Aggregates Sandpaper Security Security & CCTV Sign Board Solar Energy Stainless Steelwares Steels and Metals Survey Survey Instruments Swimming Pool Tarmac Telecommunication Timber Wallpapers Water System Water Tank Waterproofing Welding Well-Drilling Wire and Cable Wooden Product
ရနျကုနျတိုငျးဒသေကွီးအတှငျးရှိ ကြေးလကျနပွေညျသူမြားအားလုံး ၂၀၂၀ ခုနှဈ ဒီဇငျဘာလကုနျတှငျ ၁၀၀ ရာခိုငျနှုနျး လြှပျစဈဓာတျအား ရရှိအောငျ ရညျမှနျးထားကွောငျးနှငျ့ ဖွဈမွောကျအောငျ စီမံဆောငျရှကျလြှကျရှိကွောငျး ပွညျထောငျစုဝနျကွီး ဦးဝငျးခိုငျက ခတ်ထိယ-တှံတေး 33/11 KV.(5) MVA ဓာတျအားခှဲရုံ ဖှငျ့ပှဲ အခမျးအနားတှငျ ပွောကွားခဲ့သညျ။
လြှပျစဈနှငျ့ စှမျးအငျဝနျကွီးဌာန၊ ရနျကုနျလြှပျစဈဓာတျအားပေး ကျောပိုရေးရှငျး နိုငျငံတျော လြှပျစဈဓာတျအားစနဈမှ လြှပျစဈဓာတျအားသုံးစှဲမှု တဈနိုငျငံလုံး၏ ၅၀ ရာခိုငျနှုနျးပွညျ့မွောကျသညျ့ အထိမျးအမှတျနှငျ့ ခတ်ထိယ-တှံတေး 33/11 KV.(5) MVA ဓာတျအားခှဲရုံ ဖှငျ့ပှဲ အခမျးအနားကို ၂၀၂၀ ခုနှဈ ဖဖေျောဝါရီလ ၉ ရကျ နံနကျ ၉ နာရီတှငျ တှံတေးမွို့နယျ၊ ခတ်ထိယကြေးရှာရှိ အဆိုပါ ဓာတျအားခှဲရုံတှငျ ကငျြးပပွုလုပျခဲ့သညျ။
ပွညျထောငျစုဝနျကွီး ဦးဝငျးခိုငျက အမှာစကားပွောကွားရာတှငျ '' မိမိတို့အစိုးရအနဖွေငျ့ နိုငျငံတျောတဈဝှမျးမှာ တိုငျးပွညျဖှံ့ဖွိုးတိုးတကျဖို့အတှကျ လမျးပနျးဆကျသှယျရေး လုံခွုံစိတျခဖြို့၊ တိုးတကျဖို့ လြှပျစဈဓာတျအား တညျငွိမျအေးခမျြးစှာရရှိဖို့ အဓိထားပွီး ဆောငျရှကျပေးလြှကျရှိကွောငျး၊
မွဧေရိယာ ၁၈၃ ဧကပျေါတှငျ BDS Smart City Project အိမျရာစီမံကိနျး အကောငျအထညျဖျောမညျ
လြှပျစဈနှငျ့ စှမျးအငျဝနျကွီးဌာန အနဖွေငျ့ မိမိတို့မြှျောမှနျးခကျြဖွဈသညျ့ ပွညျသူမြားနှငျ့ စကျမှုလကျမှုလုပျငနျးမြား လြှပျစဈဓာတျအား ပွညျ့ဝစှာသုံးစှဲနိုငျရေးအတှကျ ဓာတျအားပေးစကျရုံမြား၊ ဓာတျအားလိုငျးမြား ၊ ဓာတျအားခှဲရုံမြား တညျဆောကျပွီးတော့ ဓာတျအားဖွနျ့ဖွူးနိုငျအောငျ တိုးမွှငျ့ဆောငျရှကျပေးလြှကျရှိကွောငျး '' ပွောကွားသညျ။
ဆကျလကျပွီး '' မွနျမာပွညျတဈဝှမျး ဝေးကှာသညျ့ ဒသေမြား လြှပျစဈဓာတျအား ရရှိသုံးစှဲနိုငျရေးအတှကျ စီမံဆောငျရှကျလြှကျရှိကွောငျး၊ ရနျကုနျတိုငျးဒသေကွီး တောငျပိုငျးခရိုငျအတှငျး ကြေးရှာပေါငျး ၁၀၃၁ ရှာရှိသညျ့အနကျက ၂၀၁၈ခုနှဈမှာ ၄၇၅ ရှာသာ လြှပျစဈဓာတျအား ရရှိခဲ့ပွီး ရာခိုငျနှုနျးအားဖွငျ့ ၄၆ ရာခိုငျနှုနျးဖွဈကွောငျး၊
၂၀၁၈-၂၀၁၉ ခုနှဈ ဘဏ်ဍာနှဈမှာဆိုလြှငျ တောငျပိုငျးခရိုငျအတှငျးမှာ ၁၂၃ ရှာကို ထပျမံ ဓာတျအားပေးဆောငျရှကျနိုငျခဲ့သညျ့အတှကျ စုစုပေါငျး ၅၉၈ ရှာ ဓာတျအားရရှိပွီး ဓာတျအားရရှိမှုအနဖွေငျ့ ၅၈ ရာခိုငျနှုနျးဖွဈကွောငျး၊
အိမျခွံမွေ ရောငျး၊ဝယျ၊ငှား လုပျငနျးပေါငျး ၉၀၅ ခုကို ရှာရနျနှိပျပါ
၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ်ဍာနှဈမှာ ကနျြသညျ့ရှာမြား လြှပျစဈဓာတျအား ရရှိအောငျဆောငျရှကျပေးရနျ စီစဉျထားသညျ့အတှကျ ၂၀၂၀ ဒီဇငျဘာလတှငျ ရနျကုနျတိုငျးဒသေကွီးအတှငျးမှာရှိသညျ့ ကြေးလကျနပွေညျသူမြားအားလုံး တဈရာရာခိုငျနှုနျး လြှပျစဈဓာတျအား ရရှိအောငျ ရညျမှနျးထားကွောငျး၊ ဖွဈမွောကျအောငျ စီမံဆောငျရှကျလြှကျရှိကွောငျး '' ဝနျကွီးက ပွောကွားခဲ့သညျ။
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်း ကျေးလက်နေပြည်သူများ ၁၀၀ ရာခိုင်နှုန်း လျှပ်စစ်ဓာတ်အားရရှိရန် စီမံဆောင်ရွက်နေ
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိ ကျေးလက်နေပြည်သူများအားလုံး ၂၀၂၀ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလကုန်တွင် ၁၀၀ ရာခိုင်နှုန်း လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ရရှိအောင် ရည်မှန်းထားကြောင်းနှင့် ဖြစ်မြောက်အောင် စီမံဆောင်ရွက်လျှက်ရှိကြောင်း ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးဝင်းခိုင်က ခတ္ထိယ-တွံတေး 33/11 KV.(5) MVA ဓာတ်အားခွဲရုံ ဖွင့်ပွဲ အခမ်းအနားတွင် ပြောကြားခဲ့သည်။
လျှပ်စစ်နှင့် စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန၊ ရန်ကုန်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေး ကော်ပိုရေးရှင်း နိုင်ငံတော် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားစနစ်မှ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားသုံးစွဲမှု တစ်နိုင်ငံလုံး၏ ၅၀ ရာခိုင်နှုန်းပြည့်မြောက်သည့် အထိမ်းအမှတ်နှင့် ခတ္ထိယ-တွံတေး 33/11 KV.(5) MVA ဓာတ်အားခွဲရုံ ဖွင့်ပွဲ အခမ်းအနားကို ၂၀၂၀ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ ၉ ရက် နံနက် ၉ နာရီတွင် တွံတေးမြို့နယ်၊ ခတ္ထိယကျေးရွာရှိ အဆိုပါ ဓာတ်အားခွဲရုံတွင် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့သည်။
ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးဝင်းခိုင်က အမှာစကားပြောကြားရာတွင် '' မိမိတို့အစိုးရအနေဖြင့် နိုင်ငံတော်တစ်ဝှမ်းမှာ တိုင်းပြည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့အတွက် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး လုံခြုံစိတ်ချဖို့၊ တိုးတက်ဖို့ လျှပ်စစ်ဓာတ်အား တည်ငြိမ်အေးချမ်းစွာရရှိဖို့ အဓိထားပြီး ဆောင်ရွက်ပေးလျှက်ရှိကြောင်း၊
လျှပ်စစ်နှင့် စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန အနေဖြင့် မိမိတို့မျှော်မှန်းချက်ဖြစ်သည့် ပြည်သူများနှင့် စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းများ လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ပြည့်ဝစွာသုံးစွဲနိုင်ရေးအတွက် ဓာတ်အားပေးစက်ရုံများ၊ ဓာတ်အားလိုင်းများ ၊ ဓာတ်အားခွဲရုံများ တည်ဆောက်ပြီးတော့ ဓာတ်အားဖြန့်ဖြူးနိုင်အောင် တိုးမြှင့်ဆောင်ရွက်ပေးလျှက်ရှိကြောင်း '' ပြောကြားသည်။
ဆက်လက်ပြီး '' မြန်မာပြည်တစ်ဝှမ်း ဝေးကွာသည့် ဒေသများ လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ရရှိသုံးစွဲနိုင်ရေးအတွက် စီမံဆောင်ရွက်လျှက်ရှိကြောင်း၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး တောင်ပိုင်းခရိုင်အတွင်း ကျေးရွာပေါင်း ၁၀၃၁ ရွာရှိသည့်အနက်က ၂၀၁၈ခုနှစ်မှာ ၄၇၅ ရွာသာ လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ရရှိခဲ့ပြီး ရာခိုင်နှုန်းအားဖြင့် ၄၆ ရာခိုင်နှုန်းဖြစ်ကြောင်း၊
၂၀၁၈-၂၀၁၉ ခုနှစ် ဘဏ္ဍာနှစ်မှာဆိုလျှင် တောင်ပိုင်းခရိုင်အတွင်းမှာ ၁၂၃ ရွာကို ထပ်မံ ဓာတ်အားပေးဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့သည့်အတွက် စုစုပေါင်း ၅၉၈ ရွာ ဓာတ်အားရရှိပြီး ဓာတ်အားရရှိမှုအနေဖြင့် ၅၈ ရာခိုင်နှုန်းဖြစ်ကြောင်း၊
၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာနှစ်မှာ ကျန်သည့်ရွာများ လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ရရှိအောင်ဆောင်ရွက်ပေးရန် စီစဉ်ထားသည့်အတွက် ၂၀၂၀ ဒီဇင်ဘာလတွင် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းမှာရှိသည့် ကျေးလက်နေပြည်သူများအားလုံး တစ်ရာရာခိုင်နှုန်း လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ရရှိအောင် ရည်မှန်းထားကြောင်း၊ ဖြစ်မြောက်အောင် စီမံဆောင်ရွက်လျှက်ရှိကြောင်း '' ဝန်ကြီးက ပြောကြားခဲ့သည်။